Protect your home | Kent Prepared
आफ्नो घर को रक्षा गर्नुहोस्
तपाईंको घरमा बाढीको लागि तयारी गर्न मद्दत गर्न उपयोगी स्रोतहरू
तपाईको घरको लागि योजना तयार गर्दा तपाईको घर बाढी आयो भने तपाई के गर्नुहुन्छ, तपाईलाई के चाहिन्छ, तपाईलाई कसलाई सम्पर्क गर्न आवश्यक छ र तिनीहरूको सम्पर्क नम्बरहरू कहाँ फेला पार्ने भन्ने बारे सोच्नको लागि समय दिन्छ।
यसमा बिताएको समयले भविष्यमा तपाई, तपाईको परिवार वा तपाईको सम्पत्तिमा हुन सक्ने कुनै पनि सम्भावित बाढीले आर्थिक, भावनात्मक र शारीरिक प्रभावलाई कम गर्न सक्छ।
के तपाईको सम्पत्ति बाढी प्रतिरोधी छ?
तपाईंको सम्पत्ति बाढी लचिलो बनाउन मद्दत गर्न सुझावहरू
छ मध्ये एक सम्पत्ति जोखिममा छ। बाढी घटनाको लागि प्रतीक्षा नगर्नुहोस्। सकेसम्म चाँडो बाढीको लागि आफ्नो सम्पत्तिको लचिलोपन सुधार गर्नुहोस्।
शेल्फिंग र इलेक्ट्रिकलहरू
उच्च माउन्ट शेल्फहरूमा अपरिवर्तनीय वा मूल्यवान वस्तुहरू राख्नुहोस्
विद्युतीय तार र सकेटहरू भुइँको स्तरभन्दा १.५ मिटर माथि उठाउनुहोस्
भान्सा र बाथरूम
पानी प्रतिरोधी सामग्रीहरू जस्तै स्टेनलेस स्टील, प्लास्टिक वा ठोस काठ प्रयोग गर्नुहोस्
नालीहरू र पानी इनलेट र आउटलेट पाइपहरूमा गैर-रिटर्न भल्भहरू फिट गर्नुहोस्
ढोका र झ्यालहरू
विशेष रूपमा बनाइएको बाढी ढोका वा उद्देश्य-निर्माण बाढी बोर्डहरू किन्नुहोस्
सिंथेटिक वा मोम लगाइएको झ्याल र ढोका, वा वार्निश स्थापना गर्नुहोस्
पर्खाल र भुइँहरू
विशेष रूपमा डिजाइन गरिएको एयरब्रिक कभरहरू किन्नुहोस् जुन भेन्टिलेसन ईंटहरूमा राख्न सजिलो छ
फिट गरिएको कार्पेटको सट्टा रगले टाइलहरू बिछ्याउनुहोस्, जुन प्राय: बाढी पछि बदल्नु पर्छ।
नोट: नेशनल फ्लड फोरमको वेबसाइट www.floodforum.org.uk मा ब्लू पेज डाइरेक्टरी प्रयोग गरेर तपाईंले खरिद गर्नुभएको कुनै पनि उपकरणको गुणस्तर जाँच गर्नुहोस्। - बाढी उत्पादनहरूले BSI Kitemark वा समकक्ष मान्यता पनि प्रदर्शन गर्नुपर्छ।
के तपाई बाढीको लागि तयार हुनुहुन्छ? व्यक्तिगत चेकलिस्ट
यदि तपाईं जोखिममा हुनुहुन्छ भने जान्नुहोस्
के तपाईलाई थाहा छ यदि तपाई बाढीको जोखिममा हुनुहुन्छ?
के तपाईंको क्षेत्रमा बाढी चेतावनीहरू उपलब्ध छन्?
के तपाईलाई थाहा छ तपाई कसरी बाढी चेतावनी प्राप्त गर्न सक्नुहुन्छ?
के तपाईलाई थाहा छ बाढी चेतावनी कोडको अर्थ के हो?
बाढी योजना तयार गर्दै
के तपाईंलाई थाहा छ तपाईंले बाढीलाई कसरी प्रतिक्रिया दिनुहुनेछ?
के तपाइँसँग फ्लडलाइन, स्थानीय प्राधिकरण, र तपाइँको बीमा कम्पनी सहित उपयोगी नम्बरहरूको सूची छ?
के तपाइँ तपाइँको ग्यास/बिजुली/पानी आपूर्ति कसरी बन्द गर्ने थाहा छ?
के तपाईको व्यक्तिगत र बहुमूल्य वस्तुहरू बाढीको स्तरभन्दा माथि भण्डारण गरिएका छन्?
यदि तपाईंसँग घरपालुवा जनावरहरू छन् भने, के तपाईंले तिनीहरूलाई निकासी केन्द्रहरूमा लैजान सक्नुहुन्छ कि भनेर जाँच गर्नुभएको छ?
के तपाईं बाढीको घटनामा मद्दत गर्न कसैलाई कल गर्न सक्नुहुन्छ?
के तपाईलाई थाहा छ बाढीको समयमा तपाईको क्षेत्रमा कुन सडकहरू खुला रहनेछन्?
के तपाईंले बाढीको अवस्थामा तपाईं कहाँ आश्रय गर्न सक्नुहुन्छ भनेर पहिचान गर्नुभएको छ?
आफ्नो सम्पत्तिको रक्षा गर्दै
के तपाईंले बाढी सुरक्षा उत्पादनहरू स्थापना गर्नुभएको छ?
के तपाईंसँग प्लाष्टिकको पाना, भरिएका बालुवाका झोला, काठ र आरा लगायतका उपयोगी सामग्रीको भण्डार छ?
के तपाईंले आफ्नो शौचालय र नालीहरूमा नन-रिटर्न भल्भहरू स्थापना गर्नुभएको छ?
के तपाईंसँग उच्च मैदान छ जहाँ तपाईं आफ्नो कार पार्क गर्न सक्नुहुन्छ?
के तपाइँको बिजुली सकेट बाढी स्तर माथि छ?
के तपाईसँग बाढीको स्थितिमा पर्याप्त बीमा कभर छ?
के तपाईलाई थाहा छ तपाईको बीमाकर्ताले दावीलाई समर्थन गर्न के जानकारी चाहिन्छ?
के तपाईलाई थाहा छ यदि तपाईको नीतिले नयाँको लागि पुरानो प्रतिस्थापन गर्छ वा यदि यसको मर्मतमा सीमा छ भने?
बाढी किट तयार गर्नुहोस्
के तपाईंले आफ्नो बीमा कागजातहरूको प्रतिलिपिहरू पाउनुभयो?
के तपाईंसँग टर्च र स्पेयर ब्याट्री, न्यानो वाटरप्रूफ कपडा र कम्बल, प्राथमिक उपचार किट र औषधि छ?
के तपाईंसँग बोतलको पानी र खाना, बच्चाको हेरचाह गर्ने वस्तुहरू छन्?
बाढी आउनु अघि, समयमा र पछि के गर्ने
व्यक्तिगत बाढी योजना सिर्जना गर्नुहोस्
बहुमूल्य वस्तुहरू उच्च भूमिमा सार्नुहोस्
बाढी चेतावनी कोडहरू जान्नुहोस्
फ्लड किट सँगै पाउनुहोस् र यसलाई हातमा राख्नुहोस्
यदि तपाईं सक्नुहुन्छ भने कमजोर बासिन्दाहरूलाई मद्दत गर्नुहोस्
बाढीको पानीमा हिड्ने वा ड्राइभिङ नगर्नुहोस्
आफूले सक्ने कुराको सुरक्षा गर्नुहोस्...
... तर भनिएपछि खाली गर्नुहोस्
आफ्नो बीमा कम्पनीलाई सम्पर्क गर्नुहोस्
भनिएको बेला मात्र चीजहरू फ्याँक्नुहोस्
सबै क्षति रेकर्ड गर्नुहोस्
सामान्य सफाई उत्पादनहरू प्रयोग गरेर आफ्नो सम्पत्ति सफा गर्नुहोस्
भूजल बाढी निर्देशन
भूजलबाट हुने बाढीको प्रभावलाई कम गर्न मद्दत गर्ने थप व्यावहारिक सल्लाह gov.uk वेबसाइटमा पाउन सकिन्छ: भूजलबाट बाढी - GOV.UK (www.gov.uk)
छविमा क्लिक गरेर PDF को रूपमा डाउनलोड गर्नुहोस्
व्यक्तिगत बाढी योजना
तपाइँको आफ्नै घरेलु बाढी योजना डाउनलोड गर्न र सिर्जना गर्न को लागी टेम्प्लेट (PDF नयाँ विन्डोमा खुल्छ)
बाढी आउनु अघि, पछि र पछि के गर्ने
आफ्नो र आफ्नो सम्पत्ति जोगाउन के गर्ने भन्ने बारे व्यावहारिक सल्लाह (PDF नयाँ विन्डोमा खुल्छ)
नेशनल फ्लड फोरम एउटा परोपकारी संस्था हो जसले तपाईंको घरमा फिट गर्न सकिने घरायसी बाढी सुरक्षा उत्पादनहरूमा स्वतन्त्र सल्लाह दिन्छ। तिनीहरूले पूंजी लागत, फिटिंग लागत, र मर्मत आवश्यकताहरू बारे जानकारी प्रदान गर्न सक्छन्। उत्पादनहरू तिनीहरूको नीलो पृष्ठहरू गाइडमा सूचीबद्ध छन्।
तिनीहरूको वेबसाइटले तपाईंको सम्पत्तिले कुन उत्पादनहरूबाट लाभ उठाउन सक्छ र अनुमानित लागतहरू बारे सामान्य गाइड दिनको लागि द्रुत अनलाइन सर्वेक्षण पनि प्रदान गर्दछ।
कार्यमा केही विशिष्ट उत्पादनहरूको भिडियोहरू तलका लिङ्कहरूमा देख्न सकिन्छ:
एकल बाढी ढोका
डबल बाढी ढोका
FloodRe बीमा उद्योग द्वारा स्वामित्व र संचालित एक गैर-लाभकारी संस्था हो। यो सरकार द्वारा आंशिक वित्त पोषित छ र बीमा उद्योग द्वारा आंशिक वित्त पोषित छ र यो बाढी सम्पत्ति को लागी किफायती बीमा प्रदान गर्ने लक्ष्य राख्छ।
मुख्य बाढी पृष्ठमा फर्कनुहोस्